CNN အင်တာဗျူး ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 8:35 PM | No မှတ်ချက် | Min Ko Ko CNN ။ ။ လူအများကို နားလည်ရခက်နေစေတဲ့ မေးခွန်းကနေ ကျနော် စမေးရမှာပါဘဲ ။ ဒေါ်စုတို့ နိုင်ငံကို ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲ ။ SUU ။ ။ တရားဝင် အခု Myanmar လို့
SUU ။ ။ ကျမတို့က Myanmar ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂမှာ အသင်းဝင်နိုင်ငံဖြစ်နေလို့ပါ ။ လက်ရှိအချိန်မှာ ကျမတို့အနေနဲ့ အစိုးရဖြစ်နေလို့ဆိုပြီး အရာရာကို ပြင်ပစ်ရမယ်လို့ ကျမ မယူဆပါဘူး ။ ဒါက (စိတ်ဓါတ်) အင်အားကိုပြလိုက်တဲ့သဘောဆိုပါတော့........အရင်ပြောခဲ့သလိုဘဲ ကျမတို့လိုချင်တာက ရင်ကြားစေ့ပြေလည်ရေး ပါ ။ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး ။ CNN ။ ။ အရင်ကအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျနေခဲ့တဲ့ အတိုက်အခံတစ်ယောက်အဖြစ်ကနေ အခုအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပေါ် ဒေါ်စု ဘယ်လိုခံစားရပါသလဲ ။
CNN ။ ။ ဒေါ်စုအနေနဲ့ နယ်ဆင်မင်ဒဲလားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခံရမှုမျိုးတွေကို စဉ်းစားမိပါသလား ။ ကမ္ဘာကြီးကို မင်ဒဲလား သင်ပြပေးခဲ့တာက '' ခွင့်လွတ်ခြင်း '' တရားလို့ ထင်ပါတယ် ..... သူက သူ့ကို ( ၂၅ ) နှစ်ကျော် မတရားထောင်ချထားခဲ့သူတွေအပေါ် ခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ်လေ ။ SUU ။ ။ (ရယ်လျက် ) လူတွေက ကျမကို ''ခွင့်လွှတ်ခြင်း'' ဆိုတဲ့ကိစ္စအကြောင်းကို မေးတတ်ကြတယ် ။ ကျမ အမြဲရှင်းပြပါတယ်.....ခွင့်လွှတ်တယ် ၊ မလွှတ်ဘူး ဆိုတာ ကျမလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး ။ တကယ်လည်း ကျမမှာ နာကျည်းခါးသီးတဲ့ခံစားချက်ဆိုတာမျိုး မရှိပါဘူး....ဒါက ကျမရဲ့ သိပ်ကိုကံကောင်းတဲ့အချက်လို့ဘဲ ထင်ပါတယ် ။ မွေးရာပါဆိုတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..... ဘ၀အပေါ်ထားတဲ့ သဘောထားအမြင်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် ။ ကျမအပေါ် (လူတွေက) ဘယ်လိုလုပ်သွားကြတယ် ဆိုတာတွေကို ကျမ သိပ်မှတ်မထားတတ်ဘူး ။
ကျေးဇူးတရားကိုတော့ နက်နက်နဲနဲ ခံစားတတ်တဲ့စိတ်ရှိပါတယ် ။ ကျမအတွက် ကောင်းတာလေးတစ်ခုခုကို လုပ်ပေးခဲ့ဖူးသူတစ်ယောက်ကိုမှ ကျမ မမေ့ပါဘူး ။ မမေ့အောင်လည်း ကြိုးစားပါတယ် ။ သူများက ကျမတို့အပေါ် ပြုမူသွားတဲ့မကောင်းမှုကို ကျမအကြာကြီး တွေးမနေတတ်တာ ကျမကံကောင်းတယ်လို့ဘဲ ထင်ပါတယ် ။ ကျမတစ်ယောက်တည်းအပေါ်လုပ်တာမျိုးတင် မဟုတ်ဘဲ ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် ဘယ်သူကဘယ်လိုလုပ်သွားတယ် ဆိုတာမျိုးတွေလည်း ကျမ အကြာကြီး တွေးမနေတတ်ပါဘူး ။ CNN ။ ။ ဒေါ်စုတို့တိုင်းပြည်က စစ်အုပ်ချုပ်မှုကနေ နောက်စနစ်တစ်ခုကို ပြောင်းတဲ့အကူးအပြောင်းကာလထဲမှာပါ ။ မြန်မာပြည်အပေါ်မှာ ဖိအားဆက်ပေးသင့်တယ် ၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဆက်ထားသင့်တယ်လို့ လူတော်တော်များများက ယူဆတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဘဲ အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေအားလုံးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီ ။ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်က တချို့သောပိတ်ဆို့မှုတွေကို ဆက်ထားသင့်တယ်လို့ မေလလောက်ကဘဲ ယူဆခဲ့သေးတယ် ......။ အဲဒီဖိအားတွေလုံးဝမလိုတော့ဘူးလို့ထင်ရလောက်အောင် ပြောင်းလဲတိုးတက်သွားပြီလို့ ဒေါ်စု ထင်ပါသလား ။ အဲဒီလို ဖိအားပေးမှုတွေ မလိုတော့ဘူးလား ။ SUU ။ ။ ( ပိတ်ဆို့မှုတွေကနေ ) နောက်တစ်ဆင့်ကို ဆက်သွားဖို့ရာ လုံလောက်တဲ့တိုးတက်မှုရှိပြီလို့ကျမထင်ပါတယ်
။ ပိတ်ဆို့မှုဆိုတာတွေကလည်း တကယ်တော့ ကျမတို့ သွားရာလမ်းမှာ အကူအညီပေးဖို့
ထားခဲ့တဲ့ အရာတွေဘဲလေ ။ ဒါတွေက လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်သွားဖို့သုံးရတဲ့အရာတွေသာဖြစ်ပါတယ် ၊ အဆုံးသတ်ပန်းတိုင်မဟုတ်ပါဘူး ။ အမေရိကန်ကွန်းဂရက်စ်က မိတ်ဆွေတွေကို ကျမရှင်းပြခဲ့သလိုဘဲ ပိတ်ဆို့မှုတွေဆိုတာ တနည်းအားဖြင့် ကျမတို့ သိပ်အင်အားမရှိခဲ့တုန်းက သုံးခဲ့ရတဲ့ကျိုင်းထောက်တွေနဲ့တူပါတယ် ။ အခုအချိန်က ချိုးထောက်တွေကို ဖယ်ပြီး ကြွက်သားတွေတောင့်တင်းခိုင်မာအောင် လုပ်ရမယ့်အချိန်ပါ ။ CNN ။ ။ ဒါပေမယ့် စစ်တပ်က သိပ်ကို ပါဝါရှိနေသေးတယ်နော် ။ သူတို့က လွှတ်တော်ရဲ့ (၂၅ ) ရာခိုင်နှုန်းရှိရမယ်လို့လည်း အခြေခံဥပဒေထဲမှာ ရေးထားတယ် ။ စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်စုတို့အနေနဲ့ ကျော်ဖြတ်လို့မရနိုင်သေးတဲ့ မျဉ်းနီ (
အကန့်အသတ်) တော့ ရှိကို ရှိမှာပေါ့ ။ SUU ။ ။ ဟုတ်ကဲ့......ရှိပါတယ် ။ ဒါကလည်း ကျမတို့က တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ( rule of law ) အပေါ်မှာ လုံးဝယုံကြည်ချက်ရှိလို့ပါ ။ အခြေခံဥပဒေကို အခုနေအခါမှာတော့ ဒီအတိုင်းဘဲ လက်ခံထားပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒါကို ကျမတို့ ပြင်ချင်ပါတယ် ။ ပြင်မယ်ဆိုတာကိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားပါတယ် ။ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်မယ်ဆိုတာ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ကျမတို့ပါတီမူတွေရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် ။
CNN ။ ။ ပြီးတော့ ဖယ်ပစ်မယ်ပေါ့.....တချို့သော.....? ။ SUU ။ ။ ကျမတို့က တကယ်ပီပြင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အခြေခံဥပဒေကိုသာ လိုချင်တာပါ ။ အစကတည်းက ဒီမိုကရေစီကျတဲ့ အခြေခံဥပဒေမရှိဘဲနဲ့တော့ အလုပ်ဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ ပြောလို့မှ မရတာ ။ CNN ။ ။ အနောက်နိုင်ငံသားတွေ ၊ အထူးသဖြင့်အမေရိကန်တွေ နားလည်ရခက်နေတဲ့ အချက်ကို မေးချင်ပါတယ်.......ဒေါ်စုတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေအကြောင်းကို ဖတ်ရင် အများအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေကို ဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ဖတ်ရတာများပါတယ် ။ မွတ်ဆလင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့( ၅ ) ရာခိုင်နှုန်းပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့ရဲ့စာရင်းတွေအရမဆို ဒီရိုဟင်ဂျာအုပ်စုကိုတော့ စနစ်တကျ ဖိနှိပ်ထားတယ် ၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ငြင်းပယ်ထားတယ် ၊ မှတ်ပုံတင်တောင် မပေးဘူး စသဖြင့်ဆိုကြပါတယ်....။ ဒီမှာတင် လူတွေအဖို့ နားလည်ရခက်နေတဲ့အချက် ရှိပါတယ်..... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းပြည်ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ လူနည်းစုမွတ်ဆလင်တွေကို
ပြင်းပြင်းထန်ထန် နှိပ်ကွပ်နေတယ် ၊ တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်နေတာကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့......အဲဒါ ဘာကြောင့်ပါလဲ ။ SUU ။ ။ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာက လွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကုန်ကမှ စတာပါ ။ ပြီးတော့ ကျမတို့လိုချင်တဲ့ အချင်းချင်းသဟာဇာတဖြစ်မှု ၊ နားလည်မှုနဲ့ သဘောထားကြီးသည်းခံမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာစေဖို့လုပ်ရတာ အခက်အခဲ အများကြီးရှိပါတယ် ။ ဒေါက်တာကိုဖီအန်နန်ဦးဆောင်တဲ့ကော်မရှင်ကို ကျမတို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ဆိုတာ ကြားမိမှာပါ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ပြသနာတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ၊ ( ရှင်တို့ )
တလျှောက်လုံး မေးနေတဲ့အခုလို မေးခွန်းမျိုးတွေကို သွားရောက်မေးမြန်းအဖြေရှာဖို့ပါ.... ပြသနာတွေက ဘာလဲ ၊ ဘာလို့ ဒါတွေဖြစ်ရတာလဲ ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ မမေ့ပါနဲ့ဦး ....ဒါက ကျမတို့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တစ်ခုတည်းသော ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး ၊ ဒါကို ကျမအခုလို ပြောခွင့်ရချိန်မှာ တခါတည်း ပြောချင်ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခုကိုဘဲ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းက အာရုံစိုက်နေခဲ့ကြတယ် ။ ဒီ ( ကိုဖီအန်နန်ဦးဆောင်တဲ့) ကော်မရှင်ကို ကျမတို့ဖွဲ့တော့ နိုင်ငံရေးပါတီတော်တော်များများက ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ် ၊ အခုလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆန့်ကျင်နေကြတုန်းပါဘဲ ။ ဒီတော့ ဒါက အခက်အခဲတွေ ဒင်းကြမ်းပြည့်နေတဲ့ အတက်လမ်းပါဘဲ ။ ကျမတို့အတွက်လည်း ဒါက စဉ်းစားရကျပ်တဲ့ကိစ္စပါဘဲ.....ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ မတူကွဲပြားမှုတွေအပေါ်မှာ သဘောထားအကြီးဆုံးဘာသာတရားဖြစ်ရက်နဲ့ ဘယ်နှယ်ကြောင့် ကျမတို့တတွေ ဒီလိုသည်းမခံနိုင်ဖြစ်နေရသလဲဆိုတာကိုပါ ။ CNN ။ ။ ဖြစ်နေတဲ့ဖိနှိပ်ရက်စက်မှုမမာဏကြောင့် ကော်မရှင်ဖွဲ့ရုံလောက်နဲ့ မလုံလောက်ဘူးလို့ ပြောတဲ့သူတွေရှိနေတယ် ။ ဥပမာပြောရရင် ငြိမ်ချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရထားတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်းလားမားကလည်း ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်အပေါ် သိပ်ကို ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့တယ် ။ ဒီ (ရိုဟင်ဂျာ) လူမျိုးတွေရဲ့ ဒုက္ခကို သက်သာသွားအောင် ဒေါ်စုအနေနဲ့ ဒီထက်ပိုမြန်မြန်လုပ်ပေးလို့ရတဲ့နည်းတစ်ခုခုများ မရှိဘူးလား ။ SUU ။
။ မဆိုင်းမတွလုပ်လို့ရတာတွေမှန်သမျ ကျမတို့ လုပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ ။ ဥပမာပြောရရင် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးလုပ်တာမျိုးတွေပေါ့ ။ အရင်တုန်းက မွတ်ဆလင်တွေကို ကန့်သတ်ထားတာတွေ ရှိခဲ့တယ် ....သီးသန့်အမိန့်တွေ ၊ ဥပဒေတွေအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ပြီး ကန့်ထားတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျမတို့လုပ်နိုင်သလောက် ဒီကန့်သတ်ချက်တွေကိုလည်း ဖယ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။
CNN ။ ။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို မဲပေးခွင့်ရော ၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအပြည့်အ၀နဲ့ရော ဆက်ဆံခံရလောက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်မယ်လို့ ဒေါ်စု မျှော်တွေးထားတားများ ရှိသလား ။ SUU ။ ။ ပထမဆုံးပြောချင်တာက နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအရေးနဲ့ ထိုက်တန်သူတိုင်းကို နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး ပေးရမှာပါ ။ ဒါက ဥပဒေအရပေါ့ ။ ဒီထက်ပိုအရေးကြီးတာက အုပ်စုတစ်စုနဲ့တစ်စုကြားမှာ အချင်းချင်းသဟဇာဖြစ်မှု ၊ နားလည်မှုနဲ့ ၊ မတူကွဲပြားမှုအပေါ်မှာသဘောထားကြီးမှု စတာတွေကို ပြန်ရအောင် ကျမတို့ လုပ်ရပါမယ် ။ လူတွေကို ဥပဒေအရ သာတူညီမျှလုပ်ပစ်လိုက်ရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး ။ ဥပေဒေတွေပြဌာန်းပြီး လူတွေတစ်ဦးပေါ်တစ်ဦးချစ်ခင်တတ်လာအောင် လုပ်လို့မှမရတာကိုး ။ CNN ။
။ နိုင်ငံတော်အကြံပေးအနေနဲ့ ဒေါ်စုသွားခဲ့တဲ့ပထမဆုံးခရီးက တရုတ်ပြည်နော် ။ တရုတ်က ဒေါ်စုတို့တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ သိပ်ကို လွှမ်းမိုးနေတယ်လို့ ဒေါ်စုမထင်ဘူးလား ။ တရုတ်စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ (မြစ်ဆုံ) ဆည်ကိုလည်း ဆောက်နေခဲ့တယ် ။ ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်
အရင်အစိုးရက ဒီဆည်စီမံကိန်းကို ရပ်ခဲ့ရတယ် ။ တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုသိပ်ကြီးလွန်းတာကို အများပြည်သူက ခံစားမိနေတာကြောင့်လို့ကျနော် ထင်ပါတယ် ။ ဒေါ်စု ဘယ်လို ထင်ပါသလဲ ။ SUU ။ ။ တရုတ်က ကျမတို့ကို လွှမ်းမိုးဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ ကျမ မထင်ပါဘူး ။ အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဟာ စီးပွားရေးအရအစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေကြတာကတော့ နေရာတကာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပါဘဲ ။ အခုခေတ်က စစ်အင်အားမသုံးဘဲ ယဉ်ကျေးမှု ၊ စီးပွားရေးစတဲ့အနုနည်းတွေနဲ့လွှမ်းမိုးနေကြတဲ့ ( soft power ) ခေတ်ကိုး ။ ဒါပေမယ့် တရုတ်ဟာ ကျမတို့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံပါ ။ ကျမတို့တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ ဘယ်လိုမှ ကင်းကွာလို့မရပါဘူး ။ ကျမတို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက တရုတ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကို ထိန်းထားနိုင်ခဲ့တယ် ။ ကျမလည်း အဲဒီအတိုင်းဘဲ ဆက်ဆက်လုပ်သွားမှာပါ ။ CNN ။ ။ သမ္မတ အိုဘားမားအပေါ် ဒေါ်စု ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ ။ သူနဲ့ ဒီတစ်ပတ် တွေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်နော် ။ SUU ။ ။ ကျမ သူ့ကို သဘောကျပါတယ် ။ သူ့ခွေးတွေကိုလည်း အရမ်း သဘောကျပါတယ် ( ပြုံးလျှက် ) ။ CNN ။ ။ သူနဲ့ ဘာတွေများ ပြောဖြစ်ခဲ့သလဲ ။
SUU ။ ။ ပိတ်ဆို့မှုတွေကိစ္စတို့ ၊ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတို့ ၊ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းမှုဖြစ်စဉ်အတွက် ဘာတွေ အတူတူလုပ်ကြမယ် ဆိုတာတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ CNN ။ ။ သူ့ကို မြန်မာပြည်သူတွေက သဘောကျကြသလား ။ SUU ။ ။ သဘောကျကြပါတယ် ။ သူက မြန်မာပြည်ကို နှစ်ခါရောက်ပြီးပါပြီ ။
ပထမခရီးမှာ မြန်မာလူငယ်တချို့နဲ့သူတွေ့တာ တော်တော်အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ် ။ SUU ။ ။ မြန်မာပြည်အတွက် ဒေါ်စုရဲ့ ရည်မှန်းချက်က ဘာပါလဲ ။ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်လား ၊ ဒါမှမဟုတ် အာရှတိုင်းပြည်ငယ်တစ်ခုမို့ တခြားနည်းနဲ့တိုးတက်မှုကို
ဖော်ဆောင်သင့်တယ်လို့ ဒေါ်စု ထင်ပါသလား ။ SUU ။ ။ တိုင်းပြည်တိုင်းဟာ သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ တိုးတက်ပုံတွေ ကွဲပြားကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ပီပီပြင်ပြင် ဖော်ဆောင်နိုင်ရင် ရေရှည်အတွက် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာ အကောင်းဆုံးဘဲလို့ ကျမထင်ပါတယ် ။
CNN ။ ။ ဒါက ဒေါ်စုရဲ့ အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်ပေါ့ ။ SUU ။ ။ ဟုတ်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ ကျမ အလုပ်ကနေ ရပ်နားဖို့ ၊ ကျမကို မလိုတော့တဲ့ အချိန်ရောက်ဖို့ ၊ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုထဲ ပါဝင်ကတည်းက ယူထားခဲ့တဲ့ ကျမရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေ ပြီးသွားဖို့က ကျမရဲ့ အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်ပါ ။ CNN ။ ။ အဲလိုပြီးဆုံးသွားရင် ဒေါ်စု ဘာလုပ်မှာလဲ ။ SUU ။ ။ အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီး ရှင်ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ စာအုပ်တစ်ချို့ကို ဖတ်မယ်လေ ( ရယ်လျက် ) ။ ခုတလော ရှင် စာအုပ်အသစ် ရေးဖြစ်သေးလား ။ CNN ။ ။ (ရယ်လျှက်) တစ်အုပ်ဆိုပါတော့....ဒါပေမယ့်သိပ်တိုလွန်းပါတယ် ။ ဒေါ်စု လက်ရှိတာဝန်တွေက ရပ်နားစရာမလိုဘဲ ဖတ်နိုင်လောက်ပါတယ် ။ အခုလို မေးမြန်းခွင့်ရတဲ့အတွက် ဒေါ်စုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ SUU ။ ။ ကျမကလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။